आईपिएल: रोमाञ्चक खेलमा मुम्बईले हरायो चेन्नईलाई » खबरहरुको एउटै केन्द्र
आईपिएल: रोमाञ्चक खेलमा मुम्बईले हरायो चेन्नईलाई
आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३ मा प्रकाशित !
एजेन्सी। कप्तान रोहित शर्माको ३३ बलमामा नटआउट ५६ रनको पारीको सहयोगमा मुम्बई इण्डियन्सले आइपीएल व्वाइन्ट टेबलको शीर्ष स्थानमा रहेको चेन्नई सुपरकिंग्सलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै यो सीजमा दोस्रो जित दर्ता गराएको छ।
मुम्बईकालागि सूर्यकुमार यादवले ३४ वलमा ४४ रन र एविन सुईसले ४३ बलमा ४७ रनको योगादन दिए। तर, जितका नायक भने रोहित शर्मा भए। उनलाई म्यान अफ दी म्याच चुनियो। मुम्बईलाई अन्तिम दुई ओभरमा २२ रन चाहिएको थियो। रोहित शमाले १९ औं ओभरमा शार्दुल ठाकुरको बलमा चौका प्रहार गरेर जित सुनिश्चित गरेका थिए। मुम्बईको आइपीएलको यो सीजनको सात खेलमा दोस्रो जित हो।
यसअघि उसले रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलोरलाई पराजित गरेको थियो। सो खेलमा पनि रोहित शर्माले ९४ रन बनाएका थिए। यो जितसँगै मुम्बई यो टुर्नामेन्टमा कायम रहने संभावना बढेको छ। मुम्बई सात खेलमा चार अंकसहित छौटौं स्थानमा छ। जबकि चेन्नई सात खेलमा दश अंक सहित शीर्ष स्थानमा छ। चेन्नई सुपरकिंग्सकालािग हरभजन सिंह र ड्वेन ब्रावोले एक एक विकेट लिए।
सुरेश रैनाको अभिजित ७५ रनको सहयोगले चेन्नई सुपर किंग्सले मुम्बई इण्डियन विरुद्धको खेलमा पाँच विकेटमा १६९ बनायो। रैनाले ४७ बलका पारीमा ५ चौका र चार छक्का प्रहार गरे। अंबाती रायडूले ३५ बलमा ४६ रन बनाए।
रोयल च्यालेन्सर्ज बेंगलोर विरुद्धको खेलको जितमा नायक कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीले २१ बलमा २६ रन बनाए। जसमा तीन चौका र एक छक्का शामेल छन्। यद्यपी मुम्बई इण्डियन्सका डेथ ओभरमा राम्रो बलिङ गरेर चेन्नईलाई ठूलो स्कोर बनाउनबाट रोक्यो।
अंवाती रायडू र शेन वाटसनले चेन्नईको पारीको सुरुवात गरेका थिए। तर, वाटसन धेरै बेर टिक्क सकेनन्। र क्रुणल पांड्याको बलमा स्कवेयर लेगमा मयंक मार्कंडेयलाई क्याच दिए। पछि सुरेश रैनाले मोर्चा सम्हाल्दै आक्रमक खेल देखाए र पाँच ओभरपछि चेन्नईको स्कोर एक विकेटको क्षतिमा ३९ रन थियो। बेन कटिङको ओभरमा रैना र रायडूले १४ रन बनाएर ५० रनको साझेदारी गरे।
चेन्नईको स्कोर दश ओभरमा एक विकेटको क्षतिमा ९१ रन थियो। क्रुणालले १२ औं ओभरमा रायडूलाई डीप मिडविकेटमा कटिङको हातबाट आउट गराए। त्यसपछि चेन्नईका कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी क्रिजमा उत्रिए र १३ औं ओभरमा चेन्नईलाई सय रन दिलाए। धोनीले १५ औं ओभरमा हार्दिकको बलमा दुई छक्का प्रहार गरे।
PREVIOUS POST Previous post: अधिकांश बैङ्कले नाफा बढाए पनि प्रतिसेयर आम्दानीमा गिरावट, कसको कति छ ?
NEXT POST Next post: क्रान्तिको नक्कल गरेर हुन्न विकास गरेर जानुपर्छ : प्रचण्ड
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, बैशाख १६, २०७५ ०७:३३